Meesha lagu dabaasho dolphins gudaha Spain | Wararka Safarka
Mariela Carril | 06/01/2022 17:00 | La cusbooneysiiyay 19/12/2021 15:03 | Talooyin, Espana
ka xalaasha waa qurux badan yihiin oo aad bay u caqli badan yihiin. Waxay yihiin naasleyda badda, cetaceans, iyo waxaa jira 34 nooc. Ma ogeyd? Waan jeclahay iyaga, laakiin waxaan u arkaa inay xayawaan yihiin oo ay tahay inaad kaligood ka tagto, markaa runtii ma fahmin rabitaanka dalxiiska ee dadku ay la falgalaan ...
Laakiin su'aashu waxay tahay, Ma kula dabaalan kartaa dolphins gudaha Spain? Mabda 'ahaan no. Kooxaha deegaanka ayaa xaqiijiyay, laakiin weli waxaa jira meelo yar oo aad si uun ugu arki karto iyaga oo dhow. Aynu wax yar ka ogaano mawduuca.
Ku dabaasha dolphins gudaha Spain
Sida aan sheegnay, aad bay u adagtahay in lagu dabaasho dolphins gudaha Spain sababtoo ah waa mamnuuc. Weli, waxaa jira meelo badan oo haa waxaa jira bandhigyo dolphin ah xitaa haddii ay tahay waxaad noqon kartaa mid u dhow, tusaale ahaan Xayawaanka lagu xanaaneeyo Madrid ama Barcelona.
Si aad wax badan ula falgasho waa inaad u tagtaa Benidorm, ilaa Mundomar. Halkan waxaa ah Mid ka mid ah dolphinarium-yada ugu wanaagsan Yurub, ma aha oo kaliya Dolphins laakiin xayawaanka kale ee badda sida qoolleyda, libaax badeedka, otters, flamingos ... guud ahaan waxaa jira 80 nooc waana meel aad ku tababaran karto. daaweynta dolphin.
Mundomar waxa lagu bixiyaa waa kulamo nus saac ah oo leh dolphins, had iyo jeer ay joogaan ilaaliyeyaal ama tababarayaal bulshada bara dhinacyada ugu xiisaha badan ee xayawaankan cajiibka ah. Inaad carruurta raacdo waa qorshe weyn. Daqiiqadu markaa waxay socotaa 30 daqiiqo waxaana ka mid ah kulanka xayawaanka, laba sawir oo waligood xasuusan doona xiriirka, tuwaal hadiyad ah, boorso dhabarka iyo dhalo yar oo biyo ah oo macdanta ah.
Halkan Waxaa lagugula talinayaa inaad si fiican horay u sii qabsato, ugu yaraan hal usbuuc, iyada oo loo marayo dukaanka internetka ama adoo u diraya email mundomar@mundomar.es oo tilmaamaya magaca, magaca qoyska, lambarka telefoonka gacanta, tirada carruurta iyo dadka waaweyn iyo wakhtiga xiisaha (oo noqon kara 12 ama 16 pm) .
Waxaad sidoo kale wici kartaa taleefan, dhammaan macluumaadka waxay yaalliin mareegaha. Maxaa haa waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo dabaasho oo aadan lahayn naafo maskaxeed, oo aanad uur yeelan oo haddii aad caruur tahay oo aad u dhexeyso 5 ilaa 12 sano oo aadan aqoon dabaasha, ku raac qof weyn. Nashqada noocaan ah waxay dhacdaa inta u dhaxaysa March iyo December, maalin kasta, oo qiimihiisu waa 80 euro qof kasta oo weyn iyo 55 ilmo kasta.
Meel kale oo Spain ah oo lagu kulmo dolphin waa Catalonia waana Aquopolis. Meeshan waxay ku taal Costa Dorada, ee La Pineda, oo u dhow Salou waana qurux badan baarkinka biyaha. Waxaad xiriir la leedahay dolphins iyada oo loo marayo a safar la hagayo, oo leh hadal waxbarasho iyo is dhexgal yar oo u oggolaanaya in xoolaha la taabto, had iyo jeerna ay isha ku hayaan ilaalada.
Sida cad, waxaad qaadi kartaa sawiro. Maanta qiimuhu waa 74 euro qof kasta iyo ilmo kasta. Carruurtu waa in ay ahaadaan ugu yaraan toddobo sano oo ay dhererkoodu ka yar yahay 1 mitir. Kuwa da'doodu u dhaxayso 15 iyo 7 sano waa in uu la socdaa qof weyn oo isna ka qayb galaya kulanka.
In Comunidad Valenciana Waxa kale oo aad la kulmi kartaa dolphins. Halkee? Marka Oceanogràfic ee Valencia iyo Baasaboorka Xayawaanka. Ma awoodi doontid inaad la kulanto oo kaliya xalaasha laakiin sidoo kale leh libaax badeed oo baro dhammaan nolosha xayawaankan cajiibka ah. Oo waxaad qaadaysaa sawir xusuus ah. Waa maxay kharashka hawshan? € 44,70 qof kasta iyo € 37 ilmo kasta.
Si loo arko dolphins ee Valencia, carruurtu waa inay ahaadaan ugu yaraan lix jir, haddii ay u dhexeeyaan lix ilaa laba iyo toban waa inay sidoo kale la socdaan qof weyn. Waxyaabaha xiisaha leh ee halkan ku yaal waa haddii aad xiisaynayso shaqada daryeel-bixiyeyaasha, waxaad noqon kartaa mid ka mid ah hal maalin. Haa, Waxaad noqon kartaa tababare maalin oo waxaad baran kartaa sida ay u daryeelaan xayawaanka. Dheeraad ah: waayo-aragnimada la seexashada shark waxaa xitaa la bixiyaa 90 euro.
El Delfinarium Selwo Marina waxay ku taal Malaga, gudaha degmada Benalmádena. Halkan dolphinarium waxay leedahay marin-biyoodka hoostiisa, oo badh-hoos-sugid, si aad u qadarin karto xayawaanka in yar oo u dhow. Ciyaaraha waa la soo agaasimay oo sawiro ayaad ka qaadi kartaa oo taabsiin kartaa dolphins-yada marka hawlahaas la dhammeeyo. Qiimaha cunug kasta waa 39 euro, qof weyna waa 74 euro, iyadoo ku xiran xilliga aad tagto.
Da'da ugu yar ee lagu raaxaysan karo Malaga waa 5 jir carruurta, iyo haa, haddii ay u dhexeeyaan 5 iyo 7 waa inay ku jiraan gacmaha qof weyn. Sidoo kale ma cabbiri karaan in ka yar 1,25 mitir oo dherer ah iyo haddii ay sidaas tahay, sidoo kale qof weyn oo iyaga ku xiga.
Kuwani waa meelaha ay suurtagal tahay in lala macaamilo dolphins gudaha Spain. Ogow anigu ma dhahayo dabaasha waayo sidaan horayba u sheegnay in dhaq-dhaqaaqa uu ka mamnuuc yahay dalka. Waxay ku saabsan tahay is-dhexgalka, isu-dhowaanshaha, taabashada, iyo wax kale oo badan..
Ka baxsan Spain, inkasta oo aad u dhow, waxaad samayn kartaa wax yar oo dheeraad ah Portugal, Zoomarine. Halkan haa waad dabaalan kartaa Waa hagaag, waxaad geli kartaa haro aad u weyn oo ay ku hareereysan yihiin dhir iyo ciid cad. Waa qaali laakiin waa u qalantaa: waxay ku kacaysaa 125 euro, iyadoo ku xiran xilliga.
Laakiin dhab ahaantii ma jirto meel kale oo Spain ah? Waa hagaag, waxaad aadi kartaa xeebta Atlantic oo aad isku qori kartaa safar kuu ogolaanaya inaad aragto iyaga oo ku nool deegaankooda dabiiciga ah., Haa runtii. Waxaa jira dalxiisyo noocaan ah ee jasiiradaha Canary, tusaale ahaan, laakiin weli waa sharci-darro in la wada dabbaasho.
Xaqiiqdu waxay tahay inay ila qumman tahay inaadan kula dabaalan karin dolphins. Taas oo ah in xoolaha laga qaado xorriyadda waxay aniga iila muuqataa naxdin, oo aad looga bartay qarnigii sagaal iyo tobnaad, miyaanay ahayn? Maxaa loo baahan yahay maanta si aad u ilaaliso meelaha noocaan ah marka aad ama aad u safri karto ama aad ka daawato TV-ga ama internetka? Haa, waan ogahay, in lagu dabaasho dolphins waa inay noqotaa mid cajiib ah oo runtii khibrad aan la ilaawi karin, laakiin miyay mudan tahay in la adkeeyo xayawaankan, lagu dhibaateeyo doomo ay ka buuxaan dalxiisayaal ama lagu xiro dolphinariums si dadku u taabtaan oo ay sawiro uga qaadaan?
Haddii si kastaba ha ahaatee hawshu kuu danayso markaas taladaydu waa taas Eeg inaad quusto ama ku dhex dabaalato dolphins duurjoogta ah. Ku samaynta xayawaanka xorta ah waa mid cajiib ah oo aad uga duwan la dhaqanka xayawaanka ku xiran, sababtoo ah tani waxay dhiirigelisaa oo kaliya ugaarsiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Espana » Meesha lagu dabaasho dolphins gudaha Spain